Howlgal dad lagu qabqabtay oo laga Degmada Baardheere | Allbalcad Online
Home WARARKA Howlgal dad lagu qabqabtay oo laga Degmada Baardheere
Howlgal dad lagu qabqabtay oo laga Degmada Baardheere
Ciidamada Booliska ee ka howlgalla degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo dad farabadan lagu xir xiray.
Howlgalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay, kaddib markii rag hubeysan ay xalay bartamaha degmadaasi ku dhaawaceen Hanti dhowaraha degmada Baardheere u qaabilsan Maamulka Jubbaland, kaas oo lagu Magacaabo Cabdi Rashiid Cabdiqaadir Warsame, iyaga oo goobta ka baxsaday.
Ciidamada ayaa waxaa ay howlgalka ka sameeyeen inta badan Xaafadaha degmada Baardheere, iyaga oo xir xiray dad u badan dhalinyaro, kuwaas oo la geeyay saldhiga Booliska degmadaas.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in dadka howlgalka lagu qabtay badi la siidayaay, hayeeshee ay jiraan weli kuwo u xiran Ciidamada booliska degmada Baardheere, balse saraakiisha ay sheegeen in baaritaan uu ku socdo.
Degmamada Baardheere ayaa waxaa ay kamid tahay degmooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka Gedo, wallow mararka qaar fariisinada Ciidamada ee duleedka degmada ay weerar ku qaadaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Previous articleJoe Biden oo Laalaya Amaradii Trump uu Hoaray Usoo Rogay
Next articleDiiwaan gelinta Musharixiinta Madaxweynaha Hirshabelle oo Maanta Lasoo Gabagabeynayo
Dowladda Maraykanka oo Ku hanjabtay in ay Joojin doonto Dhuumaha Gaaska ee Nrd Stream 2
Hogaamiyaha cusub ee militariga Burkina Faso ayaa ballan qaaday inuu ku soo Celin doono nidaamka caadiga ah ee dastuuriga ah "marka shuruudaha ay saxan...
Madaxweyne Ku-Xigeenka Maamulka Hirshabeelle oo si Kulul ugu Jawaabay Hadalkii ka...